DAAWO Qaabka Al shabaab ugu Dabaal dageen Ciida – XAMAR POST
Waxaa maalintii Labaad dabaal dega ciida uu ka socda deegaanada ay gacanta ku hayaan Ururka Al-Shabaab oo ka horjeeda Dowladda Soomaaliya iyo AMISOM.
Magaalada Jilib ee Gobolka Jubbada dhexe waxay ka mid tahay meelaha ay gacanta ku hayaan Al-Shabaab si weyna looga dareemayo farxada ciida,waxaana boqolaal dadweyne ah isugu soo baxeen goob fagaaro ah oo lagu arkayay dagaalyahano Al-Shabaab oo gaadiid dagaal wata.
Fagaaraha weyn ee Macalim Aadan Xaashi Ceyroow waxaa isugu soo baxay kumanaan dadweyne ah, markii ugu horraysay waxaa dabaal deggii maanta ka qeyb qaadanaysay diyaarado nuuca wax basaasa ah oo dusha sare ka duubaysay dabaal degga ay sameynayeen shacabka.
Diyaaradaha oo ah Drone-ka ayaa muuqaallo ka qaadeysay magaalada, diyaaradaha ayaa muddo saacada ah dul haadayay magaalada Jilib,waxaana warbaahinta Al-Shabaab ay sheegeen in diyaarada ay leeyihiin Ururka Al-Shabaab.
Waa Markii ugu horraysay oo Kooxda Al-Shabaab ay soo bandhigto diyaarado aan duuliye laheyn balse deegaanada xarakadu maamusho ayaa lagu arki jiray diyaaradaha Basaaska Mareykanka oo Hawada meeraysanaya.
TOP DHAGEYSO:- Waxgarad taageeray maamulka Hiiraanland